शुभचिन्तकले देखाउन थाले कांग्रेस विसर्जनको संघारमा पुगेका संकेतहरु « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
शुभचिन्तकले देखाउन थाले कांग्रेस विसर्जनको संघारमा पुगेका संकेतहरु
आफ्नो विधान भन्दा संविधानको प्राविधिक पक्षलाई सहारा मान्नु पर्ने दुखद अवस्था, स्थापनाकाल देखिकै पहिलो संकट, केन्द्रीय समितिले के गर्ला ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण खनालले नेपाली कांग्रेसको भविश्यको आकलन गर्दै यो दल विसर्जन हुन लागेका संकेत देखाएका छन् र त्यसबाट जोगिनका लागि उपाय पनि सुझाएका छन् । समयमै सम्पन गर्नुपर्ने एउटा मात्र उपाय रहेको । भन्छन् – नेपाली कांग्रेस अधिवेशन वा विसर्जनको संघारमा पुगेको छ । समयमै अधिवेशन सम्पन गर्नुको विकल्प छैन यदि विसर्जित नहुने हो भने ।
अर्का शुभचिन्तक विष्णु सापकोटाका अनुसार पनि यो दल विसर्जन तर्फनै लागेको देखिन थालेको छ । तर त्यसबाट जोगाउन सकिने ठाउँ चाहिँ छ । उनी भन्छन् –महाधिवेशनमा कानुनी योग्यता पुगेको सदस्य, सामान्यतया जो पनि नेतृत्वका लागि उम्मेदवार हुन् पाइहाल्छ, तसर्थ नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आउन धेरैको दाबी हुनु स्वाभाविक हो, तर विसर्जन हुन् नदिई एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका रूपमा कांग्रेसलाई जोगाइराख्ने हो भने उक्त पार्टीलाई सर्वप्रथम पार्टीभित्रकै धेरै नेताबाट जोगाउनु जरुरी छ ।
यी दुइ शुभचिन्तकले देखेका र लेखेका कांग्रेस प्रतिका चिन्ता र चासो जति पनि कांग्रेसका नेताहरुले आफनो दलका अवस्थाबारे ख्याल गरेको देखिएन । यसको केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान भएको छ आउदो १९ गतेदेखि । धेरैको अनुमान छ यो बैठकले आउदो फागुनमा सम्पन्न हुनेगरी तय भएको १४ औं महाधिवेशनको मिति पर सर्ने छ ।
कांग्रेसको विधान अनुसार यो मिति पर सर्नासाथ यसको अस्तित्व प्राविधिक मात्र रहन जानेछ । कुनैपनि पार्टीको संविधानले मात्रै जोगाएको अस्तित्वमा त्यसको प्राण हुदैन । नेपाली कांग्रेस स्थापनाको करिव ७५ वर्ष पछि यस्तो अवस्थामा पुगेको हो ।
अहिले अवस्था कस्तो देखियो भने कांग्रेसका बारे कांग्रेसी भन्दा शुभ चिन्तकहरु बढी चिन्तित रहेका देखिए । यस्तो अवसर यो दलका लागि सुखद नै हो । उनका सुझाव स्वतन्त्र हुन्छन् ।
सुझावका प्रसंग खनालकै । उनले नेपाली कांग्रेसको निकट आउन लागेको १४ औ महाधिवेशनका आम आकांक्षीहरुबाट तत्कालै एउटा आह्वान हुनु अत्यन्न्त आवश्यक भएको औल्याए थिए केही अघि एउटा विश्लेषण मार्फत । त्यस यता यो महाधिवेशनमा नेतृत्व प्राप्त गर्न एकदर्जन जति उम्मेदवार त देखिए तर शुभ चिन्तकहरुको यस्ता मागको भने कसैले सम्वोधन गरेका पाइएन यो बेलासम्म । यद्यपि उनको यो माग चाहि चर्चामा छ नै ।
मुलुकमा लोकतन्त्रको झन्डावाहक पार्टी विसर्जनमा जाला भन्ने चिन्ता हो भन्दै प्रा खनालले कांग्रेस नेतृत्वका आकांक्षीहरुले यतिखेर एउटा सार्वजनिक घोषणा गरून् भन्ने अपेक्षा प्रकट गरेका थिए । उनको अपेक्षा थियो ‘अर्को चुनावसम्म कांग्रेसलाई मैले हाँक्ने हो, अपेक्षित विजयमा पुर्‍याउनेछु, पार्टीको मूल्य, सिद्धान्त र नीतिअनुसार सहकर्मी टिमका साथ सरकार चलाउँछु, सकिनँ भने सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन्छु, घरीघरी नेतृत्वको दाबी गर्न आउँदिनँ, कुनै गुट पनि बनाउँदिनँ,। मेरो राजनीति मसँगै सकिने हो, कामहरू इतिहासमा सुरक्षित हुने हुन् ।’
यस्तो भए के हुन्थ्यो ? उनको निश्कर्ष छ – पूर्ण वा अपूर्ण दुई कार्यकाल अर्थात् दुईपटकभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व पनि गर्दिनँ भन्ने वाचासाथ कांग्रेसको नेतृत्व बन्ने हो भने त्यसले नयाँ इतिहास रच्नेछ । यसरी आउने नेतृत्व सर्धैं वाचाल, कर्मशील र गतिशील हुनेछ ।
यति गर्नका लागि विधानमा कुनै प्रावधान खोज्नुपर्दैन । नेतृत्व भनेको जनताको ट्रस्ट हो, गुटको उत्पादन होइन । यही सन्दर्भमा उनले कांग्रेससंग अव दुइवटा मात्र रोजाइ रहेको औल्याएका हुन् । भन्छन्, यतिबेला नेपाली कांग्रेस अधिवेशन वा विसर्जनको संघारमा पुगेको छ ।
नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्ने दृढता देखिएन । उता नगर्ने वहाना चाहिँ गनि साध्य छैनन् । संगठनलाई पार लगाउने नेतृत्व नै संकटको कारक बन्छ भने त्यसछिको अवस्थाका बारे उल्लेख गरिहन नपर्ला । अर्का शुभचिन्तक सापकोटाका अनुसारपनि कांग्रेस विसर्जनको बाटोमा लागि नै सकेको छ । महाधिवेशनमा नेतृत्व प्राप्त गर्न खोज्नु तिनका सख्या बढी हुनुले दल प्रतिको अकर्षण बढने होइन ।
कानूनी योग्यता पुगेको सदस्य, सामान्यतया जो पनि, नेतृत्वका लागि उम्मेदवार हुन पाउछन र महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आउन खोज्नु स्वाभाविक हो, तर दललाई विसर्जन हुन नदिने हो भने यस्तोठाउमा पुर्‍याउने पार्टीभित्रकै धेरै नेताबाट जोगाउनु जरुरी छ ।
नेपाली कांग्रेस २००३ मा स्थापना भएको पार्टी हो । यो दलले तीन पटक ठूला राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरिसकेको छ । ००७, ०४६ र ०६२–६३ का आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल कांग्रेस नै हो । पछिल्लो समय संविधान सभाको निर्वाचन, त्योसभाबाट संविधानको घोषणा, त्यो संविधान अनुसारका निकाय खडागर्न तिनैतहका सरकारको एकैवर्षमा निर्वाचन र त्यो निर्वाचनको परिणाम अनुसार सत्ता हस्तान्तरण आदि यो दलका ऐतिहासिक पक्ष हुन् ।
यस्तो दल यतिबेला विसर्जन हुनलागेको सन्दर्भमा चर्चा हुँदैछ भने यो सामान्य कुरा न होला । कठोर भन्दा कठोर समयमा पनि यसले आफनो विधानको बाटो छाडेन । यसको १४ औ महाधिवेशन भन्नाले नै यसको समय ७५ वर्षभएको बुझाउँछ । यस्तो बेला विसर्जनको कुरा आउनु र यसभित्रको चुनौती यसैका नेता मानिनु समान्य कुरा होइन ।
विसर्जनको कुरा उठेको हो जिम्मेवार ठाउँबाट सामान्य रुपमा गर्नु पर्ने सागठिनक काम नगरिँदा । प्रा. खनालले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई आफनो नोटमा राखेको पाइयो । साधारण समयमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन असाधारण समयमा सारियो । जव त्यो बेला आसधारण समय आयो अनि यस्तो सकट खडा भयो ।
यतिबेला यो असाधारण समयको अधिवेशनपनि निर्धारित समयमै होला भनेमा संशय छ । कांग्रेसको विधान अनुसार हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ । तेह्रौं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा भएको थियो । विधानतः २०७६ फागुनमै चौधौं अधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो ।
अव ७७ फागनुमा पनि गर्न नसकिने अवस्थामा छलफल गर्न भनी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । यो ठाउँमा ध्यानदिनुपर्ने के छ भने यो ७७ फागनुको म्याद तोकिदा पनि अन्तिममा पुर्‍याइएको भनी व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसबेला त्यसको सुनुवाइ भएन । जव नेतृत्व नै संगठनको ख्याल नगर्नेमा पर्छ भने त्यसपछिको अवस्था यी प्राध्यापले भने जस्तो विसर्जनको संघारमा पुग्नुको विकलप नरहला ।
कांग्रेस जनका लागि देशको सबैभन्दभरपर्दाे लोकतान्त्रिक सस्था र आफनो आस्थाको केन्द्र यस्तो ‘अधिवेशन वा विसर्जन’ भन्ने हदैसम्मको सीमामा पुगेको यो अवस्था कति दुखद हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लोकतानित्रक पद्धतिमा कुनै पनि दलको अधिवेशन एउटा सामान्य कुरा हो । आफैले बनाएको विधान अनुसार त्यो आफनो समय क्र्रममा हुन्छ । त्यसबेला जो नेतृत्वमा छ, उसको प्रथम दायित्व हो त्यो अधिवेशन सम्पन्न गराउनु । यो नियमित र सामान्य कुरा नहुँदा नै यो पार्टीको विसर्जनको कुरा आउन थालेको हुनुपर्छ । विसर्जन भनेको समाप्ती हो । यो देशमा लोकतन्त्रका लागि हरेक पटकका आन्दोलनको नेतृत्व गरेको एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक दल ‘अधिवेशन वा विसर्जन’ भन्ने रोजाइको संघारमा पुग्नु निश्चयनै सामन्य कुरा होइन ।
भित्र जेहोस तर बाहिरबाट कांग्रेस अर्कै प्रकारको देखिँदैछ । आजको दिनमा कुनैपनि एउट कांग्रेसीले यी प्राध्यापकले भनेका यी कुरा होइन भन्ने ठाउ छ ? जस्तो, एक वर्ष म्याद थपेर ढिलो गरी यो अधिवेशनको तिथि तोकिएको हो । खनालका अनुसार केही समयदेखि कांग्रेसमा हदैसम्म कार्यकाल लम्ब्याउने परम्परा बस्न थालेको छ ।
नेवि संघ, तरुण दल लगायतका भ्रातृ संगठनहरूमा त चुनाव हुनै छाडिसक्यो । पार्टीमा पनि हुने भए अधिवेशन गर्दै नगर्ने र आजीवन सभापति बन्न पाए हुँदो हो भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर त्यसको अनुमति संविधानले दिँदैन ।
संविधानले अनुमति नदिने कुरा तर्फ लागिन्छ भने त्यो विसर्जनकै बाटो त होला नि । संविधानले केही समयका लागि थमौती त गरिदेला तर त्यस्तो प्राविधिक कामले त्यो राजनीतिक संगठनको जीवन्तता कति रहला ? (क्रमशः) –सुवेदीको प्रस्तुती
कांग्रेसमा नेतृत्व बहस : पदाधिकारीका आकांक्षी नेतृहरु
कांग्रेसको विधानमा सभापतिबाटै लागेका घाउचोटहरु –क्षति कस्तो, उपचार कसले गर्ने ?
प्रकाशित मिति : आश्विन ९, २०७७ शुक्रबार २ : ३५ बजे